Hevitra MPANOHARIANA | Jolay 2013
2013-07-21 @ 23:16 in Politika
Efa nanoratra aho ny fankasitrahako ny fomba fihetsiky ny vondron'olona ato amin'ny Facebook amin'ny fahaizana mihetsika milamina sy tsy mikorontana sady tsy hiteraka korontana raha ny tokony ho izy, afa-tsy tena fanahy iniana avy amin'ireo nirahina hanakorontana mihitsy. Ny tena mahafinaritra dia tsy hita ho manana fironana politika izy fa tena olom-pirenena te-handray ny andraikiny tokoa. Avy amin'izay ihany no ahafahany mahazo olona be indrindra izay samy mitady ny hanatontosana ny fifidianana avokoa ohatra. Tahaka izany no nampazoto ahy nanoratra ilay lahatsoratra vao andro vitsivitsy lasa izay ka iandrasana ny fotoan-dehiben'ny "fifidianana amin'ny 24 jolay 2013".
Nivoaka ny fanazavana vitsivitsy voalohany, amin'ny ankapobeny dia tsara ny fotoana sy ny hanaovana ilay hetsika, fa nahita indrokelin'ny mpandrafitra aho no nahatery ahy hanoratra indray na dia tena efa sasakalina aza ny fotoana anoratana. Averina, mety ilay fotoana atoandro amin'ny 12 ora sy sasany satria tokony hanana io fotoana io avokoa ny rehetra fa tsy voatery handeha lavitra ihany koa. Ny andro moa efa saimbolika rahateo fa efa niheverana hanatontosana ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara. Ny olana kely, nefa azo vahana vetivety rehefa manana ny fitaovam-pifandraisana ihany isika dia ny fanomanana ny fandaminana hampivaingana ho hitan'ny olona ny zavatra atao.
Ny soratako eto noho izany dia tolo-kevitra ho fanatsarana, afaka miandry fotoana manaraka, efa azo tanterahina ihany koa raha vonona satria ilaina ihany koa ny halakin'ny zavatra atao nefa mahomby. Tolo-kevitra ny hoe raha hivoaka ihany dia tsy midina an-dalambe fa manao hendry tsara eny amoron'arabe. Tsy manelingelina ny fifamoivoizan'ny fiara, mety ho tapaka an-tenatenany ny rojo nefa tsy natao hampaninona izany. Ankoatra izany moa dia tsy tiako loatra ilay izy handalo tsena na tsenam-barotra fandrao misy manararaotra, izay ihany koa ilay maha-tompon'andraikitra. Raha hivoaka ihany maninona raha ny lalana iray mamakivaky ny tanàna no hanaovana azy? Azo atao ihany koa ny manamorona ny Lalampirenena ho an'izay manomorona ny lalampirenena fa raha azo atao dia tsy ampandalovina tsena sy be tangoron'olona loatra fa mora ny fanakorontanana amin'ireny faritra ireny. Lalan'i Baltika (fr: Voie Baltique sy en: Baltic Way) no anaran'ilay hetsika tiako hanatsarana azy. Fa ny tena tsikaritra ho manao azy ity dia ny firenena tany amin'ny nofehezin'ny Sovietika teo aloha (sady tany koa no nahitana azy voalohany)
Ahoana ary raha ny eto Antananarivo ohatra? Lalana lehibe iray isaky ny faritra no ifamotoana, mora indrindra ohatra ny an'Ambohimanarina satria iny lalana fandehanan'ny fiara fitaterana iny dia efa mety. Toy izany ihany koa ireo faritra hafa tsy manana lalana afa-tsy tokana toa an'Itaosy sy ireo akaiky lalam-pirenena. Fa ny anaty tanana somary mivelatra kosa no manao ahoana? Ny firaisana voalohany, noho ilay petra-kevitra hoe tsy mandalo tsena sy be tangoron'olona loatra dia manaraka ny lalan'ny 119 fa eo amin'ny paositra 67ha (telma) no manomboka dia mitomandavana manaraka an'Andriatany sy Ampefiloha ary Anosy fa mibirioka mandalo ny Boriborintany fahaefatra (Andrefan'Ambohijanahary) dia mizotra mankany mankany...
Ny boriborintany fahatelo kosa azo atao miainga amin'ny paositra Antanimena tahaka ny lalan'ny 160 sy 166 rehetra iny fa rehefa eo Ampandrana kosa dia miakatra mankany amin'ny EPP (SFF) Ankadivato mivoaka mankany amin'ny Espace Medicale (Mascotte) ary mifampitohy mankany amin'ny Score Antsahabe (fa tsy miditra ny tonelina Ambanidia) mandeha Ankazotokana mivoaka eny amin'ny terminus 186 dia afaka mizara roa ny lalana fa ny tiako fotsiny dia mamonjy ny paositra Ambanidia indray ny tondrozotra ary dia manaraka ny lalan'ny 116, 192 mankany Mandroseza. Azon'ireo mpiasa manodidina an'Analakely ny manao valalamanjohy tsy mihetsika manaraka ny zaridaina ilany atsimo, ilay lalana tsy voatapaky ny fefin'ny Lapan'ny tanàna ka mitodika manoloana ny paositra Analakely dia afa-miakatra mamonjy an'Antaninarenina hatrany Ambohijatovo. Mety ho lava loatra ny 5mn amin'izay fotoana izao fa mety ho fohy ihany koa fa mba mila fahefakadiny ohatra. Rehefa mivoaka amoron-dalana dia amin'ny ilan'ny sisindalana ihany fa tsy manao andaniny sy ankilany. Dia izay ilay resaka, revirevy ihany ny ahy nefa toa mora tontosaina raha maro ny olona vonona. Tsy mila mihogahoga fa mba mifampitsiky sy mifampiarahaba amin'ireo olona mitovy fitakiana aminao.
Tsorina fa tsy mpikarakara aho, nefa manao izao fandraisana anjarako izao ho fampieritreretana ny rehetra, azo tontosaina ny toy izao sa tsia. Maro ny rohy azonareo hieritreretana fa izay kely fantenako koa tsy ambaka angamba. Tsy mila mihogahoga mameno arabe sy mandehandeha tsy fantatra hoe mankaiza fa mba mitazatazana hivoaka sy haka rivotra kely e! Raha mbola mahita anaparitahana olona amin'izany moa ny mpitandro ny filaminana dia voatery hilahatra hanemitra ny sisindalana ihany koa, nefa tsy vao maika ve moa ho amin'ny fandraisana anjarany izany?
Jentilisa 22 jolay 2013 na roa andro mialoha ny "fifidianana"
Fampahatsiarovana ny rehetra: firenena tena nanjakan'ny fanapenam-bava no nanaovana io karazana hetsika io voalohany nefa niteraka fiantraikany goavana teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao!